Fijoroana Kiorda: Akon’ny herisetra, ny maha-izy sy ny taombaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2018 14:26 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Martsa 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Inona no mahatonga ny olona, ho olona? Inona no mamaritra ny vondrona iray: feo iraisana, tantara iraisana, kolontsaina, milina fibilaogina? Tahaka ny Iraniana, mankalaza ny Taombaovao na Newroz isaky ny volana Martsa ny Kiorda. Ao anatin'ireo fankalazana sy firariantsoa omena, misy ny alahelo sy tanjaka miafina izay mamaritra ny vahoaka Kiorda mandritra ity fety ity. Milaza ny sasany fa ny tantaran'i Kawa no mampiray azy ireo raha mihevitra kosa ny hafa fa hazon-damosin'ny maha izy azy ireo ny tantaran'ny herisetra mihatra amin'ny Kiorda. Ny volana Martsa no volana ho an'ny tsingerintaona maro ho an'ny Kiorda, herisetra ao Syria, herisetra ao Iran, fa indrindra indrindra ny horohoro nitranga tany an-tanànan'i Halapja tamin'ny taona 1988… ary i Halapja no ivon'ny fitrangan'ny herisetra vaovao tamin'ny taona 2006. .
May indray ny Halapja tamin'ny volana martsa, saingy tsy noho ireo antony eritreretinao.
Andeha aloha hojerentsika ny lanjan'i Halapja raha tsy mahazatra anao izy. Ao anatin'ny fampielezan-kevitra Anfal nataon”i Saddam tamin'ny volana Martsa 1988, natoby tao an-tanànan'i Halapja ny fifangaroan'ny fitaovam-piadiana simika/etona samihafa, ka nahatonga ny fahafatesan'ireo Kiorda 5000 mahery tao anatin'ny andro vitsivitsy. Tena mahavaky fo ny sarin'izany, sy ny fiantraikany ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy mbola tsapa hatramin'izao.
Tamin'ity taona (2006) ity, tamin'ny tsingerintaona faha-18 ny voina, nampiasain'ny mpianatra ny fahatsiarovana ho fotoana ahafahana manohitra ny kolikoly ataon'ny governemantam-paritra Kurdistan sy ny tsy fisian'ny tolotra ara-tsosialy. Nosakanana teo am-bavahady ny mpianatra, ary voatifitra ny mpanao fihetsiketsehana iray. Nanjary mari-pamantarana ny kolikoly ny fahatsiarovana an'i Halapja, toerana handraisana ireo vahiny eo an-toerana saingy toerana voaràra ho an'ireo izay omeny voninahitra … nipoaka ny herisetra vaovao ary may tanteraka ny tsangambato. Ho an'ny Amerikanina mitady zavatra mitovy amin'izany, alao sary an-tsaina hoe rava tao Washington DC ny mozean'ny Fandripahana. Misy ny tsara avy amin'izany, niala tsiny ny KRG noho ny fahafatesana sy antony nahatonga ny loza; afaka manantena fa amin'ny fandravana marika tahaka izany, horaisin'ny governemanta am-pahamatorana amin'izay ny fitakian'ny vahoaka.
Nifangaro ny fanehoan-kevitra momba ny fandoroana ny tsangambato, amin'ny maha bilaogera ny tenako, dia mbola tsy hitako izay hamaritana ny fahatsapako izany. Mizara roa ny fihetseham-po manjaka: ireo izay tezitra fa afaka narodan'ireo olona omeny voninahitra mora foana ny tsangambato (raha jerena ny maha-masina azy), na ireo izay nanenina noho ny zava-nitranga saingy mankasitraka ny fandresen'ny hetsi-panoherana izay sarotra vao azo tao anatin'izany toe-javatra izany. Sorona tena nilaina ve izany? Avelako ho anao ny fanapahan-kevitra.